Saraakiil ka tirsan booliska Kenya oo qarax lala eegtay iyo wararkii u dambeeyey - Caasimada Online
Home Warar Saraakiil ka tirsan booliska Kenya oo qarax lala eegtay iyo wararkii u...
Saraakiil ka tirsan booliska Kenya oo qarax lala eegtay iyo wararkii u dambeeyey
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka laga helayo dalka Kenya ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan kuwa Booliiska dalkaasi qarax nooca miinada ah lagula eegtay waddada xeebta ah ee gobolka Lamu, halkaas oo ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab.
Qaraxa ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday gaari ay la socdeen koox gaar ah oo ka tirsan qeybta ilaalada xuduudaha (BPU), sida uu warbaahinta uu sheegay taliyaha Booliska gobolka xeebta ah Gabriel Musau.
Sidoo kale wuxuu in taasi ku daraya in qaraxa ay ka bad-baadeen saraakiisha lala eegtay, islamarkaana uusan wax jirin wax khasaare oo ka dhashay halkaasi.
Gabriel Musau ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in kooxda ka dambeysay falkaasi inay ku fashilmeen isku daygooda, islamarkaana haatan lagu raad joogo.
“Khasaare lama soo sheegin. Way baxsadeen ka dib isku daygoodii waa uu dhicisoobay laakiin waan ku daba jirnaa,” ayuu yiri Musau.
Taliyaha ayaa ugu dambeyn shaaca ka qaaday inay kordhin doonaan howl-gallada ka soda gobolka, si looga hortago weerarada ay Al-Shabaab ka fuliyaan gudaha Kenya.
Si kastaba weerarkii u dambeeyey ayaa waxaA dagaalyahanada Al-Shabaab ay ku qaadeen duleedka WajeeR, iyaga oo ku burburiyey xarun isgaarsiineed oo ku taalla halkaasi.